Ijikọ ntụpọ | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 21, 2008 Saturday, October 17, 2015 Douglas Karr
Ma ị na-ere ngwaahịa, na-akwagharị weebụsaịtị, ma ọ bụ na-ere ọrụ gị services anyị niile nwere akara atọ na sketchpad anyị, nnweta, njide, na njigide.
Ruo ogologo oge, a na-edozi nke ọ bụla n'ime ntụpọ ndị a n'adabereghị na ya. Ọbụna anyị haziri ngalaba anyị pụrụ iche na nke ọ bụla ntụpọ:
Ngalaba Ahịa - maka nnweta.
Ngalaba Mmepụta na Ọrụ - maka ogbugbu.
Ngalaba Ọrụ Ndị Ahịa - maka njigide.
Ndị ọrụ a napụrụ iche
Igodo nke nkwalite mmụta ọsọsọ Nna-ukwu kacha elu Ching Hai nke ndị arụ ọrụ gosipụtara, mmefu ego, ụgwọ ọrụ na njikwa nke ntụpọ ndị a hapụrụ ndị isi jiri oge ndụ ha niile. Ka anyị na-elekwasị anya n'ọhụụ na ahụmịhe ha, otú ahụ ka anyị ji ụkpụrụ nduzi ha kpọrọ ihe. Chee echiche banyere oge ikpeazụ ị kwuru ya mgbe a gbara ajụjụ ọnụ… 'wow, ọ bụ naanị ihe anyị mkpa. Ọ zuru oke dabara.
Malitelarị ịtụ anya otu ị chọrọ isi kpuchie mmadụ ahụ kama iche echiche banyere otu ị ga-esi gbasaa akụ!
Ngalaba na-apụ apụ
M na hụrụ ya mbụ-aka na otú ị! Ahịa na-arụsi ọrụ ike ma na-ebu nnukwu onye ahịa naanị ka ọ ghara ịtụkwasị obi na usoro mmejuputa. N’otu ụlọ ọrụ m rụrụ ọrụ na ya, ndị ahịa ahụ ga - anọ ọtụtụ ọnwa na ọtụtụ afọ iji wee mewe mmekọrịta n'etiti ndị ahịa ahụ - wee nyefee ha ya ozugbo anyị bịanyere aka n'akwụkwọ na-enweghị ọbụna okwu.
Ahịa Ọrụ abatakwa dị ka ihe afterthought… ahịa na-ewe iwe n'ihi na atụmanya e mgbe zutere. Ngalaba Ndị Ahịa na-ahụ maka MacGyver nke ụlọ ọrụ ahụ, na-agbakọta ọnụ na-aga bobby na afụ gum iji mee ka ndị ahịa nwee obi ụtọ (ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala mee ka ha nọrọ jụụ). Ọ bụ ihe niile gbasara njigide n'oge a ebe ọ bụ na ọ dị ọnụ ala ịdebe ha ka ha chọta ndị ọhụrụ!
Mmeputa amaghi ihe nile… ha chere na oru ndi ahia bu dị nnọọ ụyọkọ whiners na ngalaba ahia kwesiri idi na-ere ihe anyi nwere karia ihe ndi ahia choro. N’oge na-adịghị anya, onye ọ bụla na-eti mkpu ma na-eti ibe ya mkpu n’ihi na ọ bụ naanị ya ka ị ga-esi azụ ahịa.
Njikọ ndị ahụ na-enye Pzọ
Workingrụ ọrụ na njikọta bụ ebe ịkwesịrị ịmalite. Ntughari aka site na ndi otu ndi ahia nke metutara mmekorita nke imejuputa ihe kwesiri ekwesi na oge kwesiri nwere ike ime ihe di iche na obuna ime ka ndi dike nke ulo oru gi, ndi ahia ndi ahia, ghara idi nkpa.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị ga-anọ na-enweghị isi n'ọchịchị ngalaba nke gbara gburugburu kemgbe Model-T gara ahịa, ọ dịkarịa ala nye ngwaọrụ maka ịkekọrịta, inyefe, ịkụziri, na ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ. Na-ego ndị isi maara ka ịgafe oke? Hà nwere ahụmịhe ọ bụla na mpaghara azụ nke ndị ọzọ? Ọganiihu ndị ahịa gị dabere na ya - yabụ azụmaahịa gị.
Ọ bụ ihe ndabakọ na nnukwu mmụba na ụlọ ọrụ na-abịa mgbe ọ bụ mmalite? Ọ bụghị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ mgbe niile - ọtụtụ oge ọ bụ ndị otu jikọtara ya ọnụ. Ebe m na-arụ ọrụ, na Sales Director mgbe enyere m aka inyocha na troubleshoot ahịa ndapụta… na m na-ezute ya kwa ụbọchị iji nweta a nghọta doro anya nke ihe atụmanya na-achọ.
Ọ na-etinyekarị ụbọchị na ndị otu njikwa akaụntụ anyị - na-eme ka ha ghọta ihe ndị ahịa chọrọ na ọ batara. Ọ bụghị mmadụ niile nwere ekele maka ya, mana m ji n'aka! N'abalị a, onye isi m na-akwado ekwentị nkwado ma na-arapara n'ahụ otu n'ime oku nkwado ndị ọzọ. Ahụmahụ ahụ bara m ezigbo uru dị ka onye isi teknụzụ ebe ọ bụ na ọ hụrụ ọnọdụ ahụ n'onwe ya.
Amaghị m na m ga-anọ ya mgbe anyị kwụsịrị ịbanye n’ahịa ndị ọzọ. Enwere m mmasị ịrụ ọrụ maka obere ụlọ ọrụ ma hụ eziokwu ahụ n'anya na ndị otu anyị siri ike. Anyị anaghị eche banyere mpaghara - naanị ihe ịga nke ọma.
Ọbụna na Weebụ
Atụmatụ weebụ gị ekwesịghị ịdị iche! Mgbe onye ọhụụ bịara na saịtị gị, olee otu ị si ekele ha? Na-amụmụ ọnụ ọchị na usoro nchịkọta akara doro anya? Ma ọ bụ jiri peeji jupụtara na mgbasa ozi na enweghị nchọgharị anya iji nye ha ụzọ maka ihe ha chọrọ? There nwere ụzọ ha ga-esi chọta gị? Bụ ọ bụla na peeji nke gị blog a ọdịda peeji? Do na-achọpụta na imirikiti ndị na-eme n'ofe saịtị gị anaghị enweta ebe ahụ site na ibe obibi, ọ bụghị ya?
Ngalaba Production gị (na-ede ederede) na-elekwasị anya na onye na-abịa na onye na-ahapụ saịtị gị? Jikọọ ntụpọ ma ị ga-enwetakwu ndị ahịa, ndị ahịa ka mma, ndị ahịa nwere atụmanya ziri ezi… na ndị ahịa ndị na-arapara gburugburu!
Ọchịchọ? I kwesiri ibu!